Banyere - OUZHAN ahia (SHANGHAI) CO., LTD
Àgwà na-ekpebi ihe niile, nkọwa na-ekpebi ihe ịga nke ọma
Ouzhan (Shanghai) Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ na-ejikọta ụlọ ọrụ na ahia. The factory dị naBuilding 38, Jinguo Industrial Park, Nke 500, Zhenkang Road, Jinshan District, Shanghai. The ụlọ ọrụ na-ekpuchi ebe ndị 1200 square mita na nwere banyere 30 rụọ, 10 injinia na 5 àgwà inspektọ. Isi akụrụngwa dị elu na nrụpụta ihe karịrị 30. Ndị mmekọ anyị gụnyere Trutzschler, iGuzzini, SafeFire, FujiXerox, Ghrepower, Reco na ndị ọzọ.
Ouzhan Trade (Shanghai) Co., Ltd. bụ ọkachamara na nhazi ahaziri iche iche nke akụrụngwa na akụrụngwa. Anyị nhazi teknụzụ gụnyere CNC-egwe ọka, CNC mbịne, Esịtidem na mpụga nkenke egweri, Laser ọnwụ na mpempe akwụkwọ metal ekwe. CNC machining, Turn-egwe ọka machining, 4/5 axis CNC machining, ibe ya bụrụ na-anwụ-mgbatị na na.
Anyị na ngwaahịa na-eji dị iche iche ubi, dị ka akwa igwe, ifufe ike ọgbọ, laabu akụrụngwa, ọgwụ ngwaọrụ, azụmahịa ọkụ, aerospace na na.
Anyị isi n'ichepụta ngwaọrụ na-imported si Switzerland na Japan.
2. Ike R & D ike
Anyị nwere ndị injinia 10 na ụlọ ọrụ R&D anyị, ha niile bụ ndị dọkịta ma ọ bụ ndị prọfesọ si Mahadum Sayensị na Teknụzụ nke China.
3. Nchịkwa Ogo siri ike
Anyị nwere ọkachamara àgwà nnyocha pesonel na equipments, dị ka mba ụkpụrụ gị ngwaahịa nwalee, na-enye a zuru ezu ule akụkọ.
4. OEM & ODM Na-anabata
Ahaziri nha na shapes dị. Nabata ịkọrọ gị eserese 2D ma ọ bụ 3D anyị, ka anyị rụọ ọrụ ọnụ iji mee ka ndụ kee ihe.
Lelee Anyị na Omume!
Ugbu a anyị nwere karịa 30 tent nke elu machining na ule akụrụngwa, ọtụtụ n'ime ha na-imported si Switzerland na Japan.
Ouzhan nwere usoro mmepụta asatọ ma nwee ike gbanwee 3000 iberibe ngwaahịa na otu ụbọchị.
Anyị nwere ụlọ ọrụ nke ndị na-ahụ maka ngwa ahịa mba ụwa na mpaghara mpaghara ahụ, anyị na-emechakwa ihe a rụpụtara n'oge, nke a ga-ebuba n'ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ ọdụ ụgbọ elu n'otu ụbọchị.
A ga-anwale ngwaahịa anyị ugboro atọ tupu mbupu: dete Onye na-achọpụta akpaaka; ② Nchọpụta aka; Test Nnwale nnwale. N'ikpeazụ, nye akụkọ nlele ahụ.
Ouzhan Trade (Shanghai) Co., Ltd. e guzobere na 2005 ma na-arụpụta akụkụ igwe maka afọ 15. Kemgbe ịmalite, mgbe anyị natara eserese 3D ma ọ bụ CAD nke ndị ahịa, ndị injinia anyị ga-enyocha ha. Na ndabere nke izute ahịa 'chọrọ, anyị nwere ike mgbe niile na-atụ ọkachamara ọkachamara aro ịzọpụta ahịa' akwụ ụgwọ ma ọ bụ mma mezue mmepụta.
Mana maka ndị ahịa ahụ enweghị eserese, ndị na-enge anyị nwere ike inyere gị aka.
1. Ọ bụrụ na ị nwere ngwaahịa na-adịghị adị na ị chọrọ ka anyị mepụta, mana ịnweghị eserese 3D, naanị ị ga-ezitere gị ngwaahịa gị, anyị nwere ike ịdepụta eserese ya wee malite ịmalite.
2. Ọ bụrụ na ịnweghị ngwaahịa ma ọ bụ eserese ahụ, ọ dị mma. Naanị kenye anyị echiche gị. Ndị injinia anyị ga-emepụta eserese dịka ihe ị chọrọ wee zigara gị maka nkwenye mgbe anwalechara.
Ouzhan ugbu a nwere ihe karịrị ndị ọrụ 30 ma karịa 10% nọ na ogo nke Nna-ukwu ma ọ bụ Dọkịta. Ndị injinia iri anyị gụsịrị akwụkwọ na mahadum kacha elu nke China nke na-arụ ọrụ na igwe ma nwee ihe ọmụma ọkachamara bara ụba. Anyị mba ọzọ ahia pesonel bụ mba ahia ọkachamara na-agụsị akwụkwọ, maara na mba ọzọ ahia usoro. Ngalaba abụọ nke ụlọ ọrụ anyị nwere ike inyere ibe ha aka ma wetara gị ọrụ kacha mma.
Omenala ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ nwere ike ịmepụta naanị site na Mmetụta, Ntinye na Mwebata. Mmepe nke Ouzhan akwadoro site na ụkpụrụ ya bụ isi n'afọ ndị gara aga ------- Ime ihe n'eziokwu, Innovation, Responsibility, Cooperation.
Ouzhan na-agbaso ụkpụrụ ahụ mgbe niile, na-adabere na ndị mmadụ, njikwa iguzosi ike n'ezi ihe, quality ike, adịchaghị aha Ime ihe n'eziokwu aghọwo ezigbo isi iyi nke asọmpi Ouzhan.
N'inwe ụdị mmụọ a, Anyị ewerela usoro ọ bụla n'otu ụzọ kwụ chịm ma kwụsie ike.
Innovation bụ ihe kachasị mkpa ọdịbendị Ouzhan.
Innovation na - eduga na mmepe, nke na - eduga n'ike n'ike.
Ihe niile sitere na ihe ohuru.
Enterlọ ọrụ anyị dị ruo mgbe ebighi ebi iji rụọ ọrụ iji kwado usoro mgbanwe na gburugburu ebe obibi ma dịrị njikere maka ohere ọhụụ.
Ouzhan nwere echiche siri ike nke ibu ọrụ na ozi maka ndị ahịa na ọha mmadụ.
Ike nke ibu ọrụ dị otú ahụ enweghị ike ịhụ, mana enwere ike ịnwe ya.
Ọ bụ mgbe niile ihe na-akpali maka mmepe nke OuZhan.
Nkwado bụ isi iyi nke mmepe
Anyị na-agba mbọ iwulite otu nkwado
Na-arụkọ ọrụ ọnụ iji mepụta ọnọdụ mmeri ka a na-ahụta dị ka ihe mgbaru ọsọ dị oke mkpa maka mmepe nke ụlọ ọrụ
Site n'izi ezi nkwado,
Ouzhan jisiri ike nweta ntinye nke akụrụngwa, mmekọrịta na-arụkọ ọrụ ọnụ, dịka ngalaba teknụzụ anyị na ngalaba ahia anyị, ka ndị ọkachamara nye egwuregwu zuru oke na ọpụrụiche ha.
1. Ahaziri igwe akụkụ ọrụ
2. producingm ụta
3. Nhazi ngwaahịa
4. makinglele nlele
5. Nkwado teknụzụ
6. Nnwale ngwaahịa
7. Ọrụ logistic na mbupụ
8. Mgbe-sales ọrụ